चलचित्र/मनोरञ्जन – Nagarik Today
Nov282018 by suchanapatiNo Comments
चलचित्र/मनोरञ्जन, मुख्य समाचार
काठमाण्डौ,१२ मङ्सीर । बन्दना नेपाल संसारको सबैभन्दा लामो समय ‘नाचेर विश्व किर्तीमान’राख्न सफल भएकी छिन्। नेपाली चेली बन्दना नेपालले सन् २०१६ मा भारतको केरेलाकी एक जना महिलाले सबै भन्दा लामो समय १२६ घण्टा नाचेर कायम गरेको रेकर्डलाई तोड्दै यो समाचार बनाउँदाको समय सम्ममा बन्दनाले १२६ घण्टा नाचिसकेकी छन् । शुक्रबार बिहान ९ बजेबाट निरन्तर नाचिरहेकी उनले आज बुधबार ३ बजेमा नै पहिलाको रेकर्ड तोडेर गिजिन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएकी हुन् । काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित बिग पार्टी प्यालेसमा उनको नृत्य अहिले पनि जारी छ । उनलाई हौसला दिनका लागि नेता तथा कलाकार तथा सञ्चारकर्मी लगायतको बाक्लो उपस्थिती रहने गरेको छ । हौसलाकै लागि अर्का सबैभन्दा बढी बोलर गिनीज बुकमा नाम लेखाउन सफल विश्व किर्तीमानी रबि लामिछाने पनि पुगेका थिए । त्यस्तै चर्चित कलाकार शंकर बिसीले पनि उनलाई नाचेर साथ दिएका थिए
काठमाण्डौ,१२ मङ्सीर । बन्दना नेपालले सबैभन्दा लामो समय सम्म ‘नाचेर विश्व किर्तीमान’राख्न सफल भएकी छिन्। नेपाली चेली बन्दना नेपालले सन् २०१६ मा भारतको केरेलाकी एक जना महिलाले सबै भन्दा लामो समय १२६ घण्टा नाचेर कायम गरेको रेकर्डलाई तोड्दै यो समाचार बनाउँदाको समय सम्ममा बन्दनाले १२६ घण्टा नाचिसकेकी छन् । शुक्रबार बिहान ९ बजेबाट निरन्तर नाचिरहेकी उनले आज बुधबार ३ बजेमा नै पहिलाको रेकर्ड तोडेर गिजिन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएकी हुन् । काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित बिग पार्टी प्यालेसमा उनको नृत्य अहिले पनि जारी छ । उनलाई हौसला दिनका लागि नेता तथा कलाकार तथा सञ्चारकर्मी लगायतको बाक्लो उपस्थिती रहने गरेको छ । cheap finasteride online. हौसलाकै लागि अर्का सबैभन्दा बढी बोलर गिनीज बुकमा नाम लेखाउन सफल विश्व किर्तीमानी रबि लामिछाने पनि पुगेका थिए । त्यस्तै चर्चित कलाकार शंकर बिसीले प
काठमाडौं, १२ मंसिर । भारतको चर्चित रियालिटि शो ‘द कपिल शर्मा शो’ फेरि प्रशारण हुने भएको छ । सोनी टिभीबाट प्रशारण हुँदै आएको ‘द कपिल शर्मा शो’ डिसेम्बरको अन्तबाट प्रशारण हुनेछ । कपिल शार्मा र सुनिल ग्रोवरबीचको विवादका कारण शो बन्द भएको थियो । अब भने पुनः यो शो सोनी टिभीबाट प्रशारण हुनेछ । जहाँ बलिउड सेलिबे्रटीको साथमा कपिल शर्माको कमेडि पञ्च देख्न सकिनेछ । शोमा किकु शारदा, चन्दन प्रभाकर, सुमोना चक्रवती लगायतका कमेडियनहरु देखिनेछन् । यसअघि शोबाट बाहिरिएका अलि सागर, सुगन्धा मिश्रा र सुनिल ग्रोवरलाई भने शोमा देख्न पाइनेछैन् । सोनी टिभीले द कपिल शर्मा शोको टिजर पनि सार्वजनिक गरेको छ । india drugs without scripts overnight.
Nov272018 by suchanapatiNo Comments
भाइरल भन्दै चर्चीत भएकी मुना मगरले आफ्नो प्रतिभाको अवमुल्यन भएको भन्दै गुनासो
चलचित्र/मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, समाज
काठमाण्डौ, ११ मङ्सीर । काठमाडौं, ११ मंसिर । बखत विष्ट र प्रतिभा चौधरीको जोडी जस्तै भाइरल भन्दै चर्चीत भएकी मुना मगरले आफ्नो प्रतिभाको अवमुल्यन भएको भन्दै गुनासो गरेकी छन् । उनले आफु र आफ्नो दाईको पवित्र नातालाई पनि गलत ढंगले ब्याख्या गरिएको बताएकी छन् । पाल्पाकी मुना काठमाण्डौं आएपछि पत्रकारसंग अन्तकृया गर्दै आफ्नो गुनासो राखेकी हुन् । उनले आफु र आफ्नो दाईलाई पनि भाइरल जोडी भनेर ब्याख्या गरिएकाले गलत अर्थ लगाइएको बताएकी छन् । उनले बखत विष्टसंग जोडेर आफुलाई टिप्पणी गरिएको भन्दै गुनासो गरेकी छन् । उनले बखतको आफ्नै क्षमता भएको र त्यसको सम्मान गर्ने भन्दै आफु पनि कुनै क्षमता भएकै कारण दर्शकले मन पराएको बताइन् । उनले आफुलाई बखतसंग जोडेर अवमुल्यन नगर्न आग्रह गरिन् । उनले आफुलाई जानकारी नै नदिई एकाएक बखत विष्टसंग भेट गराएको भन्दै गुनासो गरिन् । मुना राम्रो डान्सर र गायिका पनि हुन् । उनी पाल्पा
Nov252018 by suchanapatiNo Comments
सर्वाधिक धन राशीको गायन प्रतियागिता ‘नेपाल लोक स्टार’ प्रतियोगिता हुने
काठमाण्डौ, ९ कार्तिक । नेपाल टेलिभिजन र एपी वान टेलिभिजनबाट सर्वाधिक राशीको गायन प्रतियागिता ‘नेपाल लोक स्टार’ संचालन हुने भएको छ । पुस १७ गतेबाट संचालन हुने लोक स्टारमा प्रथम हुनेलाई ५० लाख रुपैयाँ, दोस्रो हुनेलाई २५ लाख र तेस्रो हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक चाहाना मिडियाका अध्यक्ष सहदेव कोइरालाले जानकारी दिए । सांगीतिक प्रतियोगितामा सान्त्वना पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिने उनले बताए । प्रतियोगिताका लागि अडिसन आवेदन यही मंसिर १५ गतेबाट खुल्नेछ । कोइरालाका अनुसार आवेदन नेपाल लोक स्टारको एप्स र वेभसाइटबाटै पनि भर्न सकिने छ । विभिन्न चरणमा हुने लोक स्टार प्रतियोगिताले लोक संगीतको विकास र उन्नयनमा मद्दत पुर्याउने अध्यक्ष कोइरालाले बताए । 2.5 mg cialis. लोक स्टारको प्रमुख निर्णायकमा चर्चित लोक गायक जयनन्द लामा हुने छन् । लामाले संगित महाविद्यालय इलाहबाद भारत र डिस्ट
Nov242018 by suchanapatiNo Comments
“अर्जुन सुनाम सुमधुर साँझ – २०७५” मा सबैलाई भावुक बनाए अर्जुनले
काठमाडौं,८ मङ्सीर । चर्चित गायक अर्जुन सुनामले "अर्जुन सुनाम सुमधुर साँझ २०७५" गरेका छन । शनिबार सत्यवती फिल्मसको आयोजनामा राष्ट्रिय नाचघर जमलमा सम्पन्न उक्त सुमुधुर साँझको मुख्य अतिथी वन तथा वातावरण मन्त्री शक्त बहादुर बस्नेतले दिप प्रज्वलन गरेेर उद्घाटन गरेका थिए । भिडियाे हेर्न तलकाे लिन्क क्लिक गर्नुहोस् :- ﻿ "नामुछे आमा दहिमा टिका नछरे जमरा दैबले पर्दा उठायो आमा आउदिन फर्केर बोलको गीतबाट आफ्नो प्रस्तुती सुरुवात गर्दै सबैलाई भावुक बनाएका अर्जुनले आफ्ना र अरु चर्चित गीत गाएर मन्त्रमुग्ध परेका थिए । क्यान्सर पीडितहरुको सहयोगार्थ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले बताएका छन् । सो साझ सत्यवती फिल्मसको अध्यक्ष उदिराम खड्काको अध्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा दर्शकहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । सो साँझमा औपचारिक कार्यक्रमको संचालन यज्ञराज उपाध्यायले गरेका थिए भने दोस्रो चरण
Nov232018 by suchanapatiNo Comments
गिनिज वोर्ल्ड रेकर्डको लागी नृत्य सुरु, बन्दना नेपालले गरिन यस्ताे सहास
काठमाडौँ,७ मङ्सीर । गिनिज वोर्ल्ड रेकर्डको लागी १७ बर्षिय बन्दना नेपालले नृत्य सुरु गरेकी छिन् । कक्षा १२ मा अध्यनरत १७ बर्षिय नेपालले मङ्सिर ७ गते देखी नृत्य सुरु गरेकी हुन् । बत्तीसपुतली स्थित बिग फुडल्याण्ड होटेलमा आयोजित कार्यक्रमका उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बर्षमान पुन र पर्यटन तथा संस्कृत मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गरेर उद्घाटन गरेका छन् । सानैदेखि नृत्यमा रुचि राख्ने नेपाल धनकुटामा जन्मिएर हाल काठमाडौँ नारायण थानमा बसोबास गर्दै आएकी छन् । भारतको बेंगलोर गएर पनी नृत्य सिकेको टाइम किपर तथा सोही कार्यक्रमका सहसंयोजक सन्तोष लामाले बताए । आफ्नै घरमा पनी डान्स कल्चर खोलेर नृत्य सिकिरहेको लामाले बताए । estrace wirkstoff. एकसय छब्बीस घण्टा लामो समय भएको हुँदा पुर्व देखि पश्चिम माहाकाली सम्म गाइने मौलिक लोक संस्कृती सबै खालको सोलो बिटका तथा लोप भैसकेक
रजनीकान्त र अक्षयकुमारले खेलेको यो फिल्म अहिले सम्मकै सबैभन्दा महंगो, कति होला लगानी ?
मुम्बई । बलिउड फिल्म उद्योगको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महंगो फिल्म रिलिज हुंदैछ । भारतीय फिल्मी इतिहाँसमा अहिले सम्मर्कै महंगो फिल्म २.० मंसिर १४ (नोभेम्बर २९) मा विश्वव्यापी रिलिज हुँदैछ। रजनीकान्त र अक्षयकुमार स्टारर यो फिल्म पाँच सय ४३ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो। फिल्म रजनीकान्त अभिनीत बलिउड फिल्म रोबोटको सिक्वेल हो। यो फिल्ममा अक्षयकुमारले नकारात्मक भुमिका खेलेका छन् ।यो भूमिकाका लागि उनले ५२ करोड पारि श्रमिक लिएका थिए। चलचित्रका निर्माता ए सुभासकरन, राजु महालिंगम हुन्। चलचित्रका निर्देशक एस शंकर हुन् भने संगीत एआर रहमानको छ। फिल्ममा रजनीकान्त, अक्षयकुमारका साथमा, एमी ज्याकसन, सुधांशु पाण्डे, आदिल हुसेनलगायतका कलाकार छन्। ‘२।०’ कोे पहिलो भाग ‘रोबोट’ को अन्तिममा ‘चिठी’लाई संग्रहालयमा राखिन्छ। केही वर्षपछि एक रहस्यमयी र शक्तिशाली सुपरभिलेन (अक्षय कुमार) ले सर्वसाध
Nov212018 by suchanapatiNo Comments
गायक दुर्गा बिरहीको “के छ कोशेली” बजार मा
काठमाण्डौं, ५ मङ्सीर । गायक दुर्गा बिरहीको नयाँ गीत “के छ कोशेली” को भिडियोको सार्वजनिक भएको छ । बुधवार संवाद डबलिमा उक्त गीत को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा आशिष म्युजिकका प्रबन्ध निर्देशक रामजी प्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा भएको थियो भने प्रमुख अतिथी राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका निबर्तमान अध्यक्ष चन्द्र शर्मा रहेका थिए । lipitor by mail. भिमसेन खतिवडाको संचालन रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक संचारकर्मी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गोबिन्द गिरि, सुजन लम्साल, पिएन सापकोटा, शोभा त्रिपाठि लगायत थुप्रै पत्रकार र कलाकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार तथा कलाकारहरुले शुभकामना समेत दिएका थिए । के छ कोशेली गीतमा दुर्गा बिरही, देबि घर्तीको स्वर रहेको छ भने चर्चित एबम लोकप्रिय सर्जक रमेश बिजिको शब्द अनि दुर्गा बिरही कै लय रहेको छ । उक्त गीतको भिडियो
Nov192018 by suchanapatiNo Comments
काठमान्डौ ३ मङ्सीर । नेपाली गीत संगीतमा विभिन्न खालका गीत भित्रिने गरेका छन् । कतिपय गीतले देशको मौलिक संस्कृति बोकेका छन् भने कतिपय बिकृति फैलाउने खालका पनी बजारमा भित्रिने क्रम बढ्दो छ । त्यति मात्रै नभई आफ्ना परिवारसँग बसेर भिडियो हेर्न र गीत सुन्न पनी कतिपय गीतमा सर्म लाग्ने भेटिन्छ । देशको माटोलाई सुहाउने तथा गाउँ समाजमा घटेका घटनालाई यथार्थ रुपमा उतार्ने मौलिक गीतिकथामा आधारित गीत भने कमै मात्रामा भित्रिने गरेका छन् । हाम्रो देशमा धेरै घटना घटिरहेका छन् । गरिबी र हाम्रो मुलुकमा मानिसलाई अनेक थरिका बाध्यता हुने गरेको छ । त्यहि गरिबीले गर्दा मानिस बिदेशिन बाध्य भएका छन् । त्यहि गरिबीको कारण ज्यान समेत जाने गरेको छ । यदि गरिबी हुन्थेन भने साहुसँग ऋण लिएर विदेश जना कसैलाई पर्दैन थियो । विदेश जान बाध्य भएपनि कतिपय दलाल हरुले बिचमै पैसा खाएर फसाउने र गरिबलाई धम्कि दिँदै विभिन्न यातना भ